ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Archibald Tech Co, Ltd မှ
Archibald Tech Co, Ltd သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ၆ နှစ်တာသမိုင်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့် LED စက်ရုံအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များအထူးပြုသည့်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းအနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ရုံအလင်းရောင်သီအိုရီသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်များစုဆောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့ကိုပေါင်းစည်းထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တာ ၀ န်မှာ "စက်ရုံအလင်းရောင်စွမ်းရည်ကိုမွေးမြူရန်နှင့်စက်ရုံအလင်းရောင်တွင် ဦး ဆောင်သူ" ဖြစ်ရန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခက်ခဲသောအပင်များမရှိရန်အတွက်စက်ရုံအလင်းရောင်အတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်၊ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကိုအဓိကအဖြစ်နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု "သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများဖြစ်သည်!
Archibald Tech Co, Ltd သည် LED မီးလုံးကြီးထွားမှုအတွက်အမျိုးမျိုးသောမီးလုံးများထုတ်လုပ်သည်။ ဖြည့်စွက်အလင်းထုတ်ကုန်များသည် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ 3C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုလက်မှတ်နှင့်တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များနှင့်အသုံးအဆောင်မော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်များရရှိထားသည်။ စက်ရုံ၏မီးပွိုင့်နည်းပညာသည်အလွန်ရင့်ကျက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းလိုင်းသည် ပို၍ ပြီးပြည့်စုံလာသည်။ ရောင်းချမှုမတိုင်မီစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းပညာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအရအသုံးပြုသူများသည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒေါင်လိုက်စိုက်ခင်းများနှင့်ဖန်လုံအိမ်စိုက်ပျိုးခြင်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းစိတ်အားထက်သန်မှုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအသီးသီးသို့ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုဖောက်သည်များ!
LED စက်ရုံအလင်းရောင်စီးရီး - COB ပေါင်းစပ်ပါဝါမြင့်သော LED စက်ရုံအလင်း၊ ရောင်စဉ်အပြည့်အစုံ LED စက်ရုံအလင်း၊ LED စက်မီးမီး၊ CREE LED စက်အလင်း၊ ရေစိုခံ LED စက်အလင်းအလင်းဘား;
အိမ်တွင်းဥယျာဉ်များ၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ လယ်ယာမြေများ၊ ပန်းပင်များ၊ ရေမှုန်ရေမွှားများ၊ တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှုစသည်တို့တွင် LED စက်ရုံအလင်းထုတ်ကုန်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
② Hydroponic စိုက်ပျိုးခြင်း ဖောက်သည်များကိုပညာရှင်ပီသစွာထောက်ပံ့ပါ ရောင်စဉ်နှင့်အလင်းနှင့်အတူ အပင်များကလိုအပ်ပြင်းထန်မှု။
④ပျိုးပင်စိုက်ပျိုးခြင်း Professional LED ပျိုးပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဆီမီးခွက်ပြွန်, ပိုပြီးစွမ်းအင်ချွေတာ, လျော့နည်းအလင်းယိုယွင်း နှင့်ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု။
seed အတွင်းပိုင်းပျိုးပင်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှု တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပျိုးပင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြန့်ဝေ,နှင့်အပင်များအညီအမျှကြီးထွား ပိုပြီးအားကောင်းတဲ့။
spectrum ရောင်စဉ်တန်းစက်ရုံအလင်း ပိုမိုတိကျသောအလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း